သူမကိုခံဝန်လေးထိုးပြီးအိမ်မှာအေးအေးဆေးဆေးပြန်နေဖို့ပြောလာတဲ့သူကို ပညာသားပါပါတုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – XB Media Myanmar
သူမကိုခံဝန်လေးထိုးပြီးအိမ်မှာအေးအေးဆေးဆေးပြန်နေဖို့ပြောလာတဲ့သူကို ပညာသားပါပါတုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
June 24, 2021 Bestie_Author
ဆရာဝန်မလေးတစ်ယော က်ဖြစ်သလို ပြည်သူချစ် မင်းသမီး တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ ကလေးဘဝကတည်းက အနုပညာ လောကထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့သူဖြစ်ပြီး လက်ရှိ အသက် သုံးဆယ်အရွယ်မှာတော့ အကယ်ဒမီဆုကြီးတစ်ဆုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။အနုပညာကို ချစ်မြတ်နိုးကြတာခြင်း တူတဲ့ ဒါရိုက်တာ ဏကြီးနဲ့ လက်ထပ်ထားတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု ကို အနုပညာအသိုင်းဝိုင်းက သုသု လို့ လည်း ချစ်စနိုးခေါ်ကြပါ သေးတယ်။
သူတို့ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးကတော့ အနုပညာကို ချစ်မြတ်နိုးကြတာခြင်း တူသူတွေမို့ ဝါသနာပါရာအလုပ်တွေကို အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ အချစ်ခရီး လမ်းကို အတူ လျှောက်လှမ်းနေကြတာပါ။အနုပညာလော ကမှာ အောင်မြင်မှုတွေအခိုင်အမာနဲ့ ရပ် တည်နေကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေဟာ လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့အတူ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အား မလျော့ဘဲ ရပ်တည်ကာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ပါဝင်လျက် ရှိနေတာကို အားလုံးမြင်တွေ့ရမှာပါ။
ယခုလည်း ပိုင်ဖြိုးသုက သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ Facebook မှာ ယခုကဲ့သို့ ပေါက်ကွဲထွက်လာတဲ့ ခံစားချက်ကို ရေးသားထား တာ ပါ။“ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးခဲ့မိလို့မှားသွားပါတယ်…လို့ခံဝန်လေးထိုးပြီး အိမ်မှာအေးဆေးပြန်နေရမယ်တဲ့လား ….မိသားစုနဲ့ပြန်တွေ့ရ မ ယ်တဲ့ လား…. အလုပ်တွေပြန်လုပ်ရမယ်တဲ့လား…. တချို့တွေအသက်တွေပေးသွားကြပြီ… တချိူ့တွေထောင်ထဲရောက်ကုန်ကြပြီ…. တ ချိူ့တွေအားလုံးကိုပစ်ချထားခဲ့ပြီးလက်နက်တွေကိုင်နေကြရပြီ….
သူတို့တွေအိမ်ပြန်လို့မရကြတော့ဘူး … မိသားစုနဲ့လည်းကွဲကွာကုန်ကြပြီ…. သူတို့ချစ်တဲ့အလုပ်‌တွေလည်းလုပ်ခွင့်မရကြတော့ ဘူး… .အဲဒီ့ လူတွေကိုငါရှက်တယ်…. အဖြစ်မရှိသူဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်‌နဲ့တင်ငါ့အတွက်လုံလောက်ပါပြီ… သစ္စာဖောက်ဆိုတဲ့ တံဆိပ်တော့အကပ် မခံပါရစေ နဲ့…. အရေးတော်ပုံမအောင်မချင်းငါအိမ်မပြန်ဘူး!” ဆိုပြီး ရေးသား ပေါက်ကွဲ ထွက်လာတာလေးကို ပရိသတ်ကြီးအား ပြန် လည်မျှ ဝေပေး လိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက် ပါတယ်။
ဆရာဝန္မေလးတစ္ေယာ က္ျဖစ္သလို ျပည္သူခ်စ္ မင္းသမီး တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ပိုင္ၿဖိဳးသုကေတာ့ ကေလးဘဝကတည္းက အႏုပညာ ေလာကထဲကို ဝင္ေရာက္လာခဲ့သူျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ အသက္ သုံးဆယ္အ႐ြယ္မွာေတာ့ အကယ္ဒမီဆုႀကီးတစ္ဆုကို ပိုင္ ဆိုင္ႏို င္ခဲ့ၿပီပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။အႏုပညာကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကတာျခင္း တူတဲ့ ဒါ႐ိုက္တာ ဏႀကီးနဲ႔ လက္ထပ္ထားတဲ့ ပိုင္ၿဖိဳး သု ကို အႏုပညာအသိုင္းဝိုင္းက သုသု လို႔ လည္း ခ်စ္စႏိုးေခၚၾကပါ ေသးတယ္။
သူတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးကေတာ့ အႏုပညာကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကတာျခင္း တူသူေတြမို႔ ဝါသနာပါရာအလုပ္ေ တြကို အေကာင္းဆုံးႀကိဳးစားၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းတဲ့ အခ်စ္ခရီး လမ္းကို အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကတာပါ။ အႏု ပညာေလာ ကမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြအခိုင္အမာနဲ႔ ရပ္ တည္ေနၾကတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြဟာ လတ္တေ လာျ ဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် အား မေလ်ာ့ဘဲ ရပ္တည္ကာ တစ္ေထာ င့္တ စ္ေနရာကေန ပါဝင္လ်က္ ရွိေနတာကို အားလုံးျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။
ယခုလည္း ပိုင္ၿဖိဳးသုက သူမရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ Facebook မွာ ယခုကဲ့သို႔ ေပါက္ကြဲထြက္လာတဲ့ ခံစားခ်က္ကို ေရး သား ထား တာ ပါ။“ခံစားခ်က္ကိုဦးစားေပးခဲ့မိလို႔မွားသြားပါတယ္…လို႔ခံဝန္ေလးထိုးၿပီး အိမ္မွာေအးေဆးျပန္ေနရမယ္တဲ့လား ….မိ သားစုနဲ႔ျပန္ေတြ႕ရ မ ယ္တဲ့ လား…. အလုပ္ေတြျပန္လုပ္ရမယ္တဲ့လား…. တခ်ိဳ႕ေတြအသက္ေတြေပးသြားၾကၿပီ… တခ်ိဴ႕ေ တြေထာင္ထဲေရာက္ကုန္ၾကၿပီ…. တ ခ်ိဴ႕ေတြအားလုံးကိုပစ္ခ်ထားခဲ့ၿပီးလက္နက္ေတြကိုင္ေနၾကရၿပီ….
သူတို႔ေတြအိမ္ျပန္လို႔မရၾကေတာ့ဘူး … မိသားစုနဲ႔လည္းကြဲကြာကုန္ၾကၿပီ…. သူတို႔ခ်စ္တဲ့အလုပ္‌ေတြလည္းလုပ္ခြင့္မရ ၾကေတာ့ ဘူး… .အဲဒီ့ လူေတြကိုငါရွက္တယ္…. အျဖစ္မရွိသူဆိုတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္‌နဲ႔တင္ငါ့အတြက္လုံေလာက္ပါၿပီ… သစၥာေဖာက္ဆိုတဲ့ တံ ဆိပ္ေတာ့အကပ္ မခံပါရေစ နဲ႔…. အေရးေတာ္ပုံမေအာင္မခ်င္းငါအိမ္မျပန္ဘူး!” ဆိုၿပီး ေရးသား ေပါက္ကြဲ ထြက္လာတာေ လး ကို ပရိသတ္ႀကီးအား ျပန္ လည္မွ် ေဝေပး လိုက္ပါတယ္။ ဖတ္ရႈေပးတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊ င္တဲ့ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ ပါတယ္။
ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ အဆိုတော်ရေမွန်ရဲ့တစ်ဦး တည်းသောညီမလေး ရင်နဲ့မဆံ့အောင်နာကျင်စွာနဲ့ရေး သားလာတဲ့ ရေမွန်ရဲ့အကြောင်းလေး